Ciidamo Gedoodsan Oo Inqilaabay Maamulka Gobolka Hiiraan.
Qarax Xoogan Oo Khamiistii Ka Dhacay Isgoyska Nasiib Buundo Ee Degmada Shibis.
Odayaasha Dhaqanka Beesha Hawiye Oo Qaadacay Shirkii Hotel Shaamoow.
Aabaarihii sideedii iyo barkii subaxnimo ee Khamiistii ayaa laga maqley qarax aad u weyn agagaarka isgoyska nasiib buundo ee degmada shibis ee magaalada muqdisho .
Qaraxan ayaa lala beegsaday gaari nooca loo yaqaano land-curuser (cabdi bile) oo ay saarnaayeen ciidamada dowlada KMG ah kuna sii jeeday xarunta gobolka banaadir ,islamarkaana aan gaysan wax khasaare ah iyadoo uu qaraxu kasoo dib dhacay xiligii ay ugu tala galeen kuwa qaraxa soo abaabuley .
Goob jooge magaciisa ku sheegay xasan cabdi cali ayaa saxaafada u xaqiiiyey inuu qaraxu aad u xooganaa ,islamrkaana uu dhaafay gaarigaasi ay saarnaayeen ciidamada dowlada KMG ahi ,balse uusan arkayn wax khasaare ah oo ka dhashay goobtaas .
goobta qaraxu ka dhacay ayaa isku gadaameen ciidamada xukuumada Ethiopia iyo kuwa dowlada KMG ah ,islamrkaana xiray agagaarka wadada una diidey inay isticmaalaan gaadiidka iyo dadweynuhuba,iyadoo ay xaafadaha ka ag dhowna ka bilaabeen baaritaano hubeed iyo waxyaalo kaleba .
Qaraxan ayaa kusoo beegmaya xili uu gudoomiyaha gobolka banaadir habeenkii xalay ahaa saxaafada u sheegay inuu talaabo ka qaadi doono kuwa soo abaabula qaraxyada waa siduu hadalka u dhigaye ,islamrkaana sheegay in maamulka gobolka banaadir lagu wareejiyey sadex kun oo ciidan ah oo ay ku wareejiyeen gudiga amniga qaranka ,taliyaha nabad sugida gen.darwiish iyo taliyaha booliska gen.qaybdiid.
Xarunta maamulka gobolka hiiraan iyo taliska ciidanka booliska ayaa waxaa la wareegay ciidamo ka amar qaata col,xubeero islamrkaana si xoog ah ula wareegay.
Ciidankan la wareegay xarumaha maamulka iyo ciidamada ayaa xiray dhamaan xarumaha ay dowlada KMG ahi ku lahayd gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beled-weyne .
Xiritaankan xarumaha dowlada KMG ah ayaa ka dambeeyey gedood ay sameeyeen guutada ciidamada ka amar qaata col,xubeero kadib markii ay wayeen wax mushahar ah oo ay dowlada KMG ahi ka qaataan islamrkaana ku eedeeyey dowlada iyo maamulkaba inay ku takri falaan canshuurta laga qaado gobolka hiiraan guud ahaantiiba .
Gedoodyadan ka dhaca gobolka hiiraan ayaa iskasoo daba noqday tiro ka dhowr jeer iyadoo ay dowlada KMG ahina waxba ka qaban islamrkaana aysan jirin wax masuul ah oo ka tirsan dowlada oo ka hadlay arintan .
Dhinaca kale Col,xubeero oo saxaafada la hadlayey habeenkii xalay ayaa ugu baaqay masuuliyiinta sar-sare ee dowlada inay arintan soo dhex galaan hadii kale ay noqon doonto mid meel dheer laga raadiyo xalintan khiaafkan waa siduu hadalka u dhigaye .
Xubeero ayaa intaas ku daray inaysan jirin wax dhibaato ah oo ay ciidankiisu u gaysteen xarumaha ay la wareegeen ,islamrkaana gacanta ku haya inta ay helayaan waxyaalaha ay tabanaayaan .
Si kastaba ha ahaatee arintan ayaa kusoo beegantay xili maamulka gobolka hiiraan lagu eedeeyey inay ku takri falaan dhaqaalaha kasoo xerooda gobolka ,iyadoo uu hore ugu eedeeyey gudoomiye ku xigeenka gobolka hiiraan oo lagu magacaabo gacamey.
Golaha Guurtida dhaqanka beesha hawiye ayaa qaadacday inay ka qayb qaataan kulan lagu balansanaa maanta inuu ka dhaco hotel shaamoow ee magaalada muqdisho.
Khilaafkan ayaa ka dhashay isqab-qabsi u dhexeeya odayaasha dhaqanka iyo kuwa dowlada taabacsan ,islamrkaana keenay bur bur ku yimaada shir beeleed loo balansanaa maanta oo ka dib dhacay labo maalin ka hor.
Sidoo kale kulankan ayaa waxaa qaadacay odayaasha dhaqanka beesha hawiye ,iyadoo uu shirkani loogu gogol xaarayey shirka dib u heshiisiinta sidii ay beeshu uga qayb qaadan lahayd iyadoo ka midaysan dhinaca fekerka lana xaliyo khilaafka soo jiitamayey mudad dheer.
Afhayeenka odyaasha dhaqanka beesha hawiye ayaa ugu baaqay dowlada inay soo kala gaaraan arintan murugsan ,islamrkaana sheegay inay dowlada kula talinayaan inay siyaasada isugu keenta shirka laakiin aysan jirin wax qabiilooyin ah oo iminka dagaalsan .
Axmed diiriye afhayenka dhaqanka beesha hawiye ayaa intaas ku daray inay dowladu ka fiirsato arimahan shirka ay ku qabanayso oo ay dalka isku hayaan siyaasad islamrkaana ay iyagu haday yihiin beesha hawiye aysan kasoo hor jeedin dowlada laakiin ay doonayaan in dhibaatada soomaaliya gaar ahaan muqdisho lagu dhameeyo qaab siyaasadeed waa siduu hadalka u dhigaye taas ayaana lagu guulaysan karaa .
Faafin: SomaliTalk.com | July 5, 2007